China Ems sculpt Body Contouring muruqa jidh xoog leh Warshada Machine Slimming iyo saarayaasha |KEYLASER
EMSCULPT waxay isticmaashaa tignoolajiyada xooga-saaran ee Electro-Magnetic(HIFEM).Waa nidaamka kaliya ee aduunka ee isku mar wax ka qabta murqaha iyo baruurta labadaba.
EMSCULPT oo leh tignoolajiyada HIFEM waxay keentaa muruqyo aad u sarreeya oo aan lagu gaari karin ficil tabaruc ah. Marka ay soo gaarto foosha foosha sare, unugyada murqaha ayaa lagu qasbay inay la qabsadaan xaaladdan aad u daran. Muruqa ayaa ka jawaabaya dib-u-qaabayn qoto dheer oo qaab dhismeedka gudaha ah, koritaanka myofibrils (muruqa muruqyada) hypertrophy) .Hannaanku wuxuu keenaa kororka cufnaanta murqaha iyo mugga. Gaaro baruurta iyo dhisidda murqaha.
Laba gacan oo dhabarka ah,Caloosha,Lugta,Cudud,miskaha caato ah iyo muruqa scult
Interface Operation 12 Shaashadda Midabka Taabashada LCD
Shaqada Sliming Jirka & Farsamaynta Murqaha
Qaban 2 Qabashada
Aragtida Gacmaha Electromagnetic
Soo noqnoqda 100HZ
Xoogga tamarta 0-7 Tesla
Ilbiriqsi yar 300US
Aagga daawaynta Dib u noqo,Caloosha, Lugta, Cudud, Sinta
Hore: Jidhka Cryolipolysis ee Mashiinka Qaboojinta Dufanka oo leh afar gacan oo isku mar wada shaqeeya
Xiga: Lipozero Multipolar rf vacunm Mashiinka Jidhka Slimming ee ugu cusub